Misy mahalàla an'i DOMOINA ve ?
Date: 13 mai 2017 - 08:38
Miarahaba antsika rehetra, arak'io lohateny io, mitady maika an'i DOMOINA nipetraka teny anosibe, nivavaka tao amin'ny eglizy katolika (prezidan'ny tanora tao mihitsy izy tamin'izany)sao dia misy mahalàla azy .Maika dia maika.
Misaotra mialoha amin'ny fanampiana avy amintsika.
Re: Misy mahalàla an'i DOMOINA ve ?
Date: 29 novembre 2017 - 18:53
Za mahafantatra azy, fa ahoana
Date: 20 décembre 2017 - 18:24
Misy ilaiko azy maika.